Tonga tany India ny iPhone 6s. Ho tonga any Thailand amin'ny 30 | Vaovao IPhone
Taorian'ny nanombohany ny 25 septambra sy ny fahatongavany tamin'ny onja faharoa an'ny firenena tamin'ny 9 oktobra, ny iPhone 6s ary ny iPhone 6s Plus dia namely ny onja fahatelo amin'ny firenena, lisitra misy firenena fito: India, Kazakhstan, Makedonia, Malezia, Malta, Montenegro ary ny Repoblikan'i Afrika Atsimo. Ny fahatongavan'ilay iPhone 6s sy iPhone 6s Plus ho an'ny firenena Indiana dia tonga taorian'ny fanambaràna ny Fiaraha-miasa amin'ny Apple miaraka amin'i Croma, fifanarahana iray ahafahan'ny orinasa tarihin'i Tim Cook manaja ny lalàna eo an-toerana ary manokatra ny zavatra akaiky indrindra izay fivarotana ho azy any India. Na izany na tsy izany, ity fifanarahana ity dia hanomboka amin'ny volana Novambra.
Amin'izao fotoana izao, ny mpampiasa any India dia afaka mividy iPhone 6s na iPhone 6s Plus amin'ny misy mpivarotra Apple nahazo alalana na mpandraharaha an'ny firenena sy any amin'ny firenen-kafa misy ny smartphone Cupertino amidy.
Misaotra an'ireo mpanjifantsika rehetra any India izay milahatra amin'ny misasakalina ho an'ny iPhone 6s sy iPhone 6s Plus vaovao! pic.twitter.com/MxSkRk2BmP
- Tim Cook (@tim_cook) Oktobra 16, 2015
Misaotra an'ireo mpanjifa karana rehetra izay nilahatra tamin'ny misasakalina tamin'ny iPhone 6s sy iPhone 6s Plus vaovao.
Toy ny mahazatra, ny CEO an'ny Apple, Tim Cook Nisaorany tamin'ny tambajotra sosialy Twitter ny fanampiana an'ireo karana rehetra tonga tao amin'ny Apple Store hividy iPhone 6s na iPhone 6s Plus, indrindra ireo izay nilahatra alina.
Androany tokony natsangana ihany koa ny iPhone 6s sy iPhone 6s Plus vorontsiloza, fa ny fanombohana Nahemotra io ho an'ireo asa fampihorohoroana nitranga tato ho ato tao amin'ny firenena Tiorka. Ny herinandro no hanombohana azy. Ireo firenena amin'ny onja fahefatra dia afaka mahazo iray amin'ireo iPhones vaovao manomboka amin'ny 23 Oktobra. Ny lisitry ny firenena ao amin'ity onja fahefatra ity dia misy Belarosia, Guam, Moldavia, Serbia, Korea avy any atsimo ary Okraina, izay tafiditra ao Torkia noho ny fahatarana voalaza etsy ambony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 6s » Tonga tany India sy firenena enina hafa ny iPhone 6s. Tonga any Thailandy sy any amin'ny firenena hafa izy amin'ny 30th
Kolombia dia ampahany amin'ny onja fahefatra. Afaka androany aho. Alao mialoha ny finday ary amin'ny 23 dia manomboka mivarotra azy ireo !!
Rahoviana no tonga any Kolombia ny iPhone 6S?
Ity fanadihadiana ity dia milaza fa ny fakan-tsarin'ny iPhone 6s dia mihoatra ny an'ny 6